Oracle Kudzoreredza Turu. Oracle DBF Kugadzirisa & Kudzoreredza Software.
DataNumen Oracle Recovery ndiro yakanakisisa Oracle DBF kugadzirisa uye kugadzirisa chishandiso pasi. Inogona kugadzirisa yakaora Oracle DBF dhatabhesi mafaera uye dzoreredza matafura ese uye zvimwe zvinhu zviri mazviri zvakanyanya sezvinobvira, nokudaro kudzikisira kurasikirwa muhuori hwefaira.
4.90 / 5 (kubva 1,638 mavhoti)
Sei DataNumen Oracle Recovery?
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Oracle Recovery v1.0
Tsigira ese mavhezheni e Oracle Database DBF mafaira.
Kutsigira kuti uwanezve DBF mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekudzosera batch ye DBF mafaira.
Yakabatanidzwa neWindows shell, kuti iwe ugone kupora a DBF faira ine mamiriro ezvinyorwa mune iyo Explorer zviri nyore.
kushandisa DataNumen Oracle Recovery Kudzoreredza Zvakaora Oracle Databases
Kana zvako DBF mafaira akakuvadzwa kana akaora uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen Oracle Recovery kuongorora iyo DBF mafaera uye kudzoreredza yakawanda data kubva kwavari sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora DBF mafaira ane DataNumen Oracle RecoveryNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo DBF mafaira.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata DBF faira kuti riwanikwe:
Unogona kuisa iyo DBF faira zita zvakananga kana tinya iyo
bhatani kuti uwane iyo DBF faira kuti riwanikwe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen Oracle Recovery ichaponesa yakadzorerwa DBF faira mufaira nyowani inonzi xxxx_recovered.DBF, uko xxxx ndiro zita rezvinobva DBF faira. Semuenzaniso, for source DBF faira USERS01.DBF, zita rekutanga refaira rakadzorerwa richava USERS01_recovered.DBF. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
bhatani, uye DataNumen Oracle Recovery kuda start kuongorora uye kudzoreredza sosi DBF faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana iri sosi DBF faira rinogona kudzoreredzwa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura zvakadzorerwa DBF fayela mukati Oracle.
DataNumen Oracle Recovery 1.0 inoburitswa muna Kukadzi 22nd, 2019